युवा कांग्रेसको पक्षमा : प्रदीप पौडेल | नेपालको सम्झना
Browse » Home » समय सान्दर्भिक विचार/विश्‍लेषणहरु » युवा कांग्रेसको पक्षमा : प्रदीप पौडेल
युवा कांग्रेसको पक्षमा : प्रदीप पौडेल
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा झन्डै ४० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व र कतिपय जिल्ला नेतृत्वमा युवाहरूको विजयले कांग्रेससँगै सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रलाई नै उत्साहित बनाएको छ । एकातिर यो कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको युवाप्रतिको भरोसाको प्रमाण हो भने अर्कोतिर ‘बूढाहरूको पार्टी’का रूपमा उपहास गरिने कांग्रेसभित्र पुनःगठन र नवीकरणको व्यग्रता नाप्ने मापक पनि हो । विभिन्न बाहुबलीय संगठन बनाएर युवाहरूको दुरुपयोग गर्ने लहर चलेको बेला कांग्रेसले युवाहरूलाई पार्टीकै नीतिनिर्माण तहमा पुर्‍याएको छ । पुरानाहरूलाई विस्थापित गरेर उनीहरू आएका होइनन्, पुरानाहरूकै सदाशयता र विश्वास जितेर आएका हुन् ।
नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मा झापा जिल्ला सभापतिमा पराजित हुनुभयो । केन्द्रीय नेताहरूको चलखेल हुन्थेन भने उहाँ हार्नुहुन्थेन । केन्द्रीयस्तरमा लोकपि्रय छवि भएर पनि जिल्ला संगठन मजबुत बनाउन कस्सिएका विश्वप्रकाशको हारले दुःखित तुल्यायो भने चितवन महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रत्यासी विकास कोइराला चितवन जिल्लाको सभापतिमा निर्वाचित हुँदा खुसी
लाग्यो । डडेलधुराबाट १९ वषर्ीया कौशिल्या भट्ट कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नु हाम्रालागि अत्यन्त उत्साहको विषय हो । १२ कक्षा पढ्दै गरेका प्रकाश नेपाली काभ्रेबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने विषय कसैको अनुमानमा पनि थिएन ।
नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टीभन्दा पनि एउटा विचारधारा र आन्दोलन हो । हाम्रा अग्रजहरूले इतिहासको एउटा चक्र, एउटा युग पूरा गरे । तिनले राणाशासन विरुद्धको, पञ्चायती तानाशाह विरुद्धको र अन्त्यमा राजतन्त्र विरुद्धको ऐतिहासिक संघर्षहरूको नेतृत्व गरे र जिते । लोकतन्त्रको भरोसालाई बचाएर राखे । तिनको त्याग, वलिदान र कष्टले नै मुलुक र कांग्रेसलाई बचायो । तर शासनको मोर्चामा तिनका गम्भीर असफलताले मुलुकमा अतिवादलाई फल्ने र फुल्ने ठाउँ दियो । सिद्धान्तलाई समयानुकूल व्याख्या गर्न र व्यवहारसँग जोड्न नसक्दा पार्टीको ठूलो पंक्ति निष्त्रिmय र पलायन भयो । हुँदाहुँदै कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा केवल सैंतीस सिटमात्र जित्ने लज्जास्पद अवस्थासमेत आयो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी अन्धश्रद्धा र वफादारीले मात्र बाँच्न सक्दैन । कांग्रेसलाई अब वफादारीबाट बहसतिर, अन्धश्रद्धाबाट तर्कतिर लैजानैपर्छ । तर के युवाहरूको कांग्रेसले मात्र त्यो क्षति र जनसमर्थनको भर्पाइ गर्न सक्छ त ? पूरै पार्टीलाई चिन्तन र व्यवहारमा युवा बनाउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस ०४६ सालपछि एक किसिमको जडताको सिकार भएको छ । यसको नेतृत्वमा मूलतः ०४६ साल अघिको आन्दोलनका अगुवाहरू छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले केवल १४ जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चालीस वर्षभन्दा मुनिका युवालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तीमध्ये पनि धेरैजसो जिल्ला मधेसका थिए, जहाँ कांग्रेसका केन्द्रीय र जिल्लाको एउटा पंक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम वा तमलोपामा गएपछि पुराना अनुहारहरूको अभाव भएको थियो । समानुपातिकतिर पनि चालीस वर्षमुनिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व केवल बाह्र प्रतिशत रह्यो, जबकि यो वर्ष समूहका क्रियाशील सदस्य कांग्रेसमा झन्डै साठ्ठी प्रतिशत छन् ।
२०४६ सालपछि कांग्रेस अघाएको र थाकेको पार्टीजस्तो भएको छ । न नेतृत्वमा नवीनता छ, न नीतिमा । सात सालमा कांग्रेस भर्भराउँदा युवाहरूको पार्टी थियो । कांग्रेस स्थापना गर्दा वीपी कोइराला जम्मा ३३ वर्षका हुनुहुन्थ्यो । ०१५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा जम्मा ४५ वर्षको । तरुण पार्टीको त्यो छवि पछिसम्म पनि कायम थियो । सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू पनि ४० कै हाराहारीमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुग्नुभएको थियो । अहिलेको पुस्ताले इतिहासको त्यो तथ्यमाथि नै अविश्वास गर्ने अवस्था किन आएको छ भने कांग्रेसको त्यही पुस्तामात्रै दसकौंदेखि पार्टी केन्द्रमा छ ।
यसको अर्थ युवाहरूका लागि विशेषाधिकार वा आरक्षणको वकालत होइन, व्यक्तिगत रूपमा म युवा हुनुको सहानुभूतिको पक्षमा पनि छैन । ‘युवाहरूको कांग्रेस’ले मात्र कांग्रेसलाई बचाउँदैन, त्यसका लागि त ‘युवा कांग्रेस’ चाहिन्छ । नीतिमा, विचारमा, संगठनमा, उत्साहमा, प्रतिबद्धतामा र आस्थामा युवा । प्रश्न उमेरको होइन । प्रश्न हो- नीतिको, सिद्धान्तको र व्यवहारको, आँटको, साहसको । युवकत्व उमेर होइन, प्रवृत्ति हो ।
नेपाली कांग्रेस सुतेको सिंहजस्तो भएको छ । हिजो दलितका बस्तीमा सबैभन्दा पहिला चेतनाको उज्यालो लिएर जाने धनमानसिंह परियारको यो पार्टीसँग आज दलित नै तर्किएका छन् । मंगलादेवी सिंह र द्वारिकादेवी ठकुरानीको यो पार्टीका महिला आफूले पाएको भूमिकासँग सन्तुष्ट छैनन् । महेन्द्रनारायण निधिको यो पार्टीप्रति मधेसी जनताको भरोसा घटेको छ । सबभन्दा पहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग गर्ने, विर्ता उन्मूलन गर्ने र योजना बनाउँदा किसानको तस्वीर अगाडि राख भन्ने वीपीको यो पार्टीसँग किसान निराश छ । राज्यको पुनःसंरचनाको खाकासम्म पेस गर्न नसक्दा एलबी गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, शेख इदि्रश, दिवानसिंह राई, भूविक्रम नेम्बाङ, मणिराज राना, बलबहादुर राई जस्ताले बलिदान गरेको पार्टीप्रति जनजातिहरूकोे अविश्वास अझ बढेको छ । जबकि जनजातिहरूलाई संगठित गर्ने र तिनमा स्वाभिमान भर्ने पहिलो पार्टी पनि कांग्रेस नै थियो । हुँदाहुँदै राजधानीका सम्भ्रान्त र अभिजातहरूसमेत नेकपा -एमाले) तिर आकषिर्त भएका छन्, यद्यपि ती कहिल्यै साँचो मनले कांग्रेससँग थिएनन् । आखिर कांग्रेसको व्यवहारमा त्यस्तो के खोट छ, जसले कांग्रेससँग न किसान, न जमिनदार, न मजदुर छ, न मालिक सन्तुष्ट हुनसके ।
कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्वको प्रश्न नबनाउँ, नेतृत्वसँग नीतिको पनि प्रश्न बनाउँ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा भएका जगन्नाथ आचार्यलाई सरकारबाट निकाल्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता के थियो ? मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हिम्मत गर्ने शैलजा आचार्यले राजिनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको मजबुरी के थियो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा अन्धो निजीकरण गरेर धनी र गरिबको यति ठूलो पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने कारण के थियो ? अनुहारहरूमात्र फेरेर कांग्रेस फेरिन्न, कांग्रेसको चिन्तन प्रणाली फेर्नुपर्छ, यसलाई समावेशी बनाउनुपर्छ र साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादी बनाउनुपर्छ । कांग्रेसको मुख्य हतियार विचार हो, यसलाई धारिलो बनाउन प्रस्टताको आवश्यकता छ ।
राजनीति समाजसँग संवादको विज्ञान हो । कांग्रेसका थुप्रै नेताले समाजसँग सोझो संवादको सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल गुमाएका छन् । आफ्नो समयको सबभन्दा समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी पार्टीलाई विपन्न जनताको पंक्तिबाट अलग गर्ने र केवल सुविधासम्पन्न मान्छेहरूको हित गर्ने पार्टी बनाउने नेताहरू को-को हुन्, महाधिवेशनमा नापतौल हुनेछ । हामी युवाहरू यो पार्टीलाई बचाएकोमा आफ्ना अग्रजहरूप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छौं र त्योसँगै यो पार्टीलाई भविष्यमा पनि बचाइरहन दृढसंकल्पित छौं । कांग्रेसलाई फेरि दलितसँग जोड्ने, जनजातिसँग जोड्ने, कणर्ालीसँग जोड्ने, विपन्नसँग जोड्ने, नवयुवाहरूसँग जोड्ने सूत्र के हो ? महाधिवेशनले तय गर्नुपर्छ । कांग्रेस इतिहासको पुस्तक होइन, वर्तमान हो र भविष्य पनि हो भन्ने आधार के हो ? महाधिवेशनले जवाफ दिनुपर्छ । कांग्रेसमाथि धेरै प्रश्न छन्, तर उत्तर छैनन् । युवा कांग्रेसले मात्र ती प्रश्नको उत्तर दिनसक्छ । पार्टीलाई नै युवा बनाउने योभन्दा उत्तम मौका अरू हुन सक्दैन ।
Posted by नेपालको सम्झना at 1:44 PM
0 comments to “युवा कांग्रेसको पक्षमा : प्रदीप पौडेल”